Isampulu yeTransducer yeGazi
UMnu-Bayer / Medrad
Umahluko kwiInjector yeendaba
I-CT ezimbini ze-Injector
Isikhumbuzo seminyaka engama-21
ngomphathi ku 09-07-21
Nge-20 kaJulayi, 2021 sisikhumbuzo sama-21 seAntmed. Kuyasivuyisa ukuba sizimisele ukuya kwinqanaba elitsha ngokuzimisela nokusebenza nzima. Emva kweminyaka engama-21 kunetha kwaye kukhanya, sivune iziqhamo ezityebileyo. Sizimisele ukwakha uphawu lwesizwe ngokubanzi kwindawo ephezulu yoxinzelelo ...
U-Antmed unikele ngesigidi esinye kwi-Henan Catastrophic Flood Resonctruction Work
ngomphathi ku 09-01-21
Ukusuka nge-2021 kaJulayi 17 ukuya kuma-21, iPhondo laseHenan lafumana imvula enkulu ngokwembali. Yeyona imvula inkulu ukusukela ngo-1961. Yenzekile kuzo zonke iidolophu kwiphondo laseHenan kwaye imvula inkulu kakhulu kwimimandla esemantla nasembindini. Ubuninzi bemvula e-Zhengzhou ngama-461 ....
I-Antmed yandisa umzamo wokugonya i-Covid-19
Ukusukela nge-Epreli 28th, 2021, amaphondo angama-31 (imimandla ezimeleyo kunye noomasipala bengingqi ngokuthe ngqo phantsi koRhulumente oMbindi) kunye ne-Xinjiang Production and Construction Corps baxele ukuba i-24,3905,000 yeedosi zokugonya ze-COVID-19 ziye zenziwa. Phendula ...
I-Anthem 1ml / 3ml / 5ml I-Luer-Lock COVID-19 iisirinji zokugonya
Ngaba unayo imfuno engxamisekileyo yeesirinji ze-COVID-19 Vaccine? Okanye ngaba ufuna ukugcina inani elikhulu kwilizwe lakho / kwingingqi? I-Antmed, uphawu lwesirinji ephezulu yoxinzelelo e-China, ihambisa ngeenxa zonke kwihlabathi ngomgangatho ophezulu kunye nokuthembeka kwe-1ml / 3ml / 5ml ye-Luer-Lock tip ...
I-Antmed kunye neMedica Trade Fair
IMedica Trade Fair ngumboniso owaziwayo kwihlabathi kunye nenombolo yokuqala yomboniso wezonyango. Yaziwa njengesona sibhedlele sikhulu sikhulu emhlabeni kunye nezixhobo zonyango ezinesilinganiselo kunye nefuthe lazo elingenakufakwa. Yeyona vane yecandelo lezonyango. Qho ngonyaka, ngaphezulu kwama-3 600 ...
Indawo ephantsi efileyo 1mL Luer-lock Vaccine Intshayelelo
Kwi-2020, ngenxa yokusasazeka kwesifo esitsha secoronavirus, ubomi obuqhelekileyo babantu buchaphazeleke kakhulu. Phantse i-7 yezigidigidi zabantu emhlabeni kufuneka begonyelwe le ntsholongwane intsha. Yonke imakethi yokugonya ngoku inqongophele. Uninzi lwabantu alunakho ukufumana i-covid entsha ...
I-Antmed 1ML / 3ML Isithuba esisezantsi seLuer-lock Syringe Mass Production
I-Shenzhen Antmed Co., Ltd. igxile kuphando nakuphuhliso, ukuvelisa, ukuthengisa kunye nenkonzo yezixhobo zonyango ezihambele phambili kwezobuchwephesha. Siyinkokeli yentengiso yasekhaya kwisirinji yoxinzelelo oluphezulu kunye nakumacandelo eshishini lokuhambisa uxinzelelo. Sibonelela ngesisombululo esinye ...
Icandelo lezonyango laseTshayina lihlala lilicandelo elihamba ngokukhawuleza kwaye ngoku libekwa njengowesibini kwintengiso yezempilo enkulu kwihlabathi. Isizathu sokukhula ngokukhawuleza kukuba inkcitho eyandayo yezempilo kwisixhobo sezonyango, amayeza, isibhedlele kunye neinshurensi yokhathalelo lwempilo. Ngaphandle ...
Isirinji yokutshixa iLuer isetyenziswa kakhulu kumazwe asentshona. Kwinkoliso yamazwe asaphuhlayo, isirinji eslip esithandwa kakhulu ngenxa yexabiso eliphantsi. Uyilo lwesiliphu se-luer lubonakala lulula-ungayifaka nje. Kodwa ayisiyonto ilula le, kodwa yingxaki enkulu yeklinikhi enxulumene nokuba ...
Ukubonelelwa nge-Antved Covid-19 1ml / 3ml Isirinji sokugonya
ngomphathi ku 01-28-21
Iimpawu ezishushu: isirinji ye-1ml, isirinji ye-3ml, isirinji elahlwayo, ukulungiswa kwamachiza, ukuthunyelwa kumazwe aphesheya, ugonyo lwaseCanada, iinaliti kunye neesirinji, ii-odolo zesifo se-ANTMED, njengesiTshayina esikhokela umenzi wesirinji ephezulu, siyaluqonda uxanduva esiluthweleyo njengomnye wabanikezeli abaphambili ndi ...
Umahluko woThengiso lweeMedia kwiMarike ka-2021
ngomphathi ku 01-21-21
Umahluko phakathi kweNtengiso yeMithombo yeendaba kwiMedia ka-2021 Ingqokelela yentengiso yeendaba yamandla eendaba isetelwe ukonyuka ukusuka kwizigidi ezingama-945 yezigidi ngo-2016 ukuya kuthi ga kwi-2.0 yezigidigidi zeedola ngo-2024, ngokophando kunye nenkampani yokubonisana noMcKesson. Oku kubonisa izinga lokukhula lonyaka (CAGR) leepesenti ezili-12. I ...
Uhlalutyo loMgaqo-nkqubo wokuThengwa kweXabiso laseTshayina lowama-2020
Uhlalutyo loMgaqo-nkqubo wokuThengwa kweXabiso laseTshayina lowama-2020 urhulumente wase-China wasasaza inkqubo yezonyango ephezulu kunye nokuthengwa kweziyobisi kunyaka ophelileyo kwaye uyayandisa kulo nyaka. Ezi nzame zonyusa amandla ethethathethwano ngexabiso kurhulumente kubavelisi beziyobisi kunye nezixhobo zonyango, bencedisa ...